Kuyaziwa ukuthi iphesenti elithile labantu besifazane abaphila ngokocansi, bahlushwa yizo zonke izinhlobo zezifo ezinjani. Kwabanye, kungaba yindlela yokuvuvukala, noma isifo se-venereal, kwabanye, lesi sifo singabangelwa izici zengqondo. Isifo esivame kakhulu esibangelwa izici ezihlukahlukene zangaphandle, yi-vaginismus, ebizwa ngokuthi i-vulvism, i-colpospasms noma i-neurosis yezocansi. Lesi sifo sithinta ama-2-3% wabesifazane, futhi singafinyelela, kungakhathaliseki ubudala.
Kusetshenziselwa ubuhlobo bobulili, lesi sifo sisebenza njengesivikelo sokuziphendulela ngaphambi kokuphambana (ukungena). Kubonakala ekunciphiseni okuthandwayo kwamathanga, ukuchotshozwa kwemisipha yezinsikazi futhi naphezu kokuzibandakanya, ukuzivikela okuvikelayo kwenyama. Kwenzeka ukuthi emva kokuphelelwa isikhathi, lesi sifo siziqhayisa ngokwawo, kodwa kukhona ingozi ukuthi uma ungathathi izinyathelo ngokuhamba kwesikhathi, uzoba "ukungabi namandla" kwabesifazane, okubekwe yi-virgogamy.
Iqiniso elifakazelwe ukuthi imbangela eyinhloko yokubukeka kwe-vaginismus yizifo ezingokwengqondo ezifana nokucindezeleka, izinzwa nokunye okunjalo. Esimweni esicindezelayo ne-neuroses, i-vaginism yindlela yokuzivikela yomzimba kuphela, kodwa hhayi ukwesaba ubudlelwane bobulili. Ukuphendula okunjalo kungenzeki kuphela endaweni esondelene nayo, kungenzeka futhi ukukhulisa izifo ezihlukahlukene ze-somatic.
Ngokucindezeleka nezinye izimo ezikhathazayo, ubufazi bezinhlobo ze-phobia, ngamanye amazwi, ezihambisana nokwesaba ukuhlolwa kumjozi wezifo zokwelapha noma ngokwesaba ukusondelana. Lesi sifo sibonakala ngabesifazane besifazane abangenakulondolozeka ngokweqile kakhulu, noma abesifazane abanobuhlobo obunempumelelo obuhlangene, obuhambisane nokuzwa okungajabulisayo nokubuhlungu okungase kuhlotshaniswe nezinye izifo nokuvuvukala, noma ukwelashwa okungahambi kahle kumlingani ozocansi.
Ngokuvamile, imbangela ye-vaginismus ingaba ubudlova bezocansi, umshado ophoqelelwe, inzondo kumlingani noma ukungabi namandla, lapho ebeka khona umlingani wakhe.
Ngokuvamile, abesifazane bahlukunyezwa yi-vaginismus, ngemva kwabo, ngemva kokuziphatha ngokocansi okuqala nokulandelako, i-hymen ihlala ingaguquki, kodwa ayikushiyi ukuthi kungenzeka ukuthi lesi sifo kubabesifazane abahlala isikhathi eside emshadweni, ngisho nalabo abaye bazalwa, kulokhu kuphela izimbangela ezibangela ukuthi lesi sifo sishintshe.
Ukwelashwa kwe-vaginismus kufanele kube okuphelele, kuqhutshwa odokotela bokuzikhethela okuhlukene: iziganga zezinkinga zokubeletha, izazi zobulili, izazi ze-psychologists kanye ne-proctologists. Okokuqala, kubalulekile ukuthola ukuthi kungani imbangela yalesi sifo, bese uqala ukwelapha.
Ukwelashwa, kanye nokuthi kungenzeka yini ukuqala kwalesi sifo, kungahlukahluka kokwelapha jikelele okulwa nokuvuvukala, kwenye indawo eyodwa.
Lapho ukwelashwa kwe-vaginismus yangempela ithatha i-psihologi ngentshiseko, ukusebenzisa ukwelashwa kwezindlela ezinjenge-hypnosis, ukuqeqeshwa kanye nezingxoxo ezichazayo, ukuxhumana nodokotela wezengqondo kulandela umlingani ocansini wesiguli, i-tk. isimo singase sivele lapho imbangela yomsuka wesifo kuyodingeka ihlangane ndawonye.
Ngokuvamile, abesifazane abahlukunyezwa yi-vaginismus bayelulekwa ngezinhloso ze-prophylactic ukuba bafunde izifundo zokuphumula.
Ngesikhathi ukwelashwa kwe-vaginismus, isiguli sichaza izidakamizwa nokucindezeleka, okungeke kwenze nje ukuthi ulwazi lwesiguli luzwele kakhulu isidingo sesiguli, ubuhlungu bokuhlolwa kochwepheshe besifo somzimba, kodwa futhi kuphazamise ubuhlungu.
Uma imbangela ye-vaginismus ingubuqotho bezinyosi, ibhujiswa ngokungenelela kwe-microsurgical.
Ukubikezela ukuphathwa kwezifo
Ngokuvamile, ukwelashwa kwe-vaginismus kuletha imiphumela emihle. Owesifazane uphinde abuyele impilo yakhe yocansi, futhi isimo sakhe sengqondo sisungulwe. Esikhathini esizayo, abesifazane abaye bahlaselwa yi-vaginism, baze babelethe izingane. Uma kunjalo, lesi sifo asizange siphenduke - lokhu kusho ukuthi imbangela yalesi senzakalo yayiyinkimbinkimbi eyinkimbinkimbi, yengqondo.
Umkhuhlane, izimpawu zawo eziwumkhuhlane, ukuvimbela kwawo
Indlela yokukala ukushisa okuyisisekelo
Kuhle ukuphuza iwayini nsuku zonke
Indlela yokuhlala emincane ngemuva kwe-50: 4 imithetho elula ka-Alena Sviridova
Iyini impilo, kungani kuyadingeka nokuthi ungayisindisa kanjani
Izindlela ezizosiza ukuxazulula inkinga ngokulala
Ukudla kukaMaya Plisetskaya
I-Vitamin zokupheka ezinganeni
Isimo sonyaka omusha kubantu abadala: kumnandi kangakanani ukuchitha uNyaka Omusha ka-2015
Izinkondlo mayelana Nonyaka Omusha 2017 wezingane ezineminyaka engu-2-4 no-5-9 ubudala ku-matinee enkulisa nasezikoleni. Amavesi omntanama omnandi omnyaka omusha
Ukuncintisana kokuzivocavoca komntwana "yisikhathi sokuma emilenzeni"
Ukuthinta amavesi ezinyembezi ekubizeni kokugcina-2017
U-Bilberry ubanjwe ushukela
I-Banana Ethosiwe ku-Batter
Indlela yokukhulisa indoda yangempela kumfana
I-Bruschetta ne-utamatisi nomshukela omnandi
Inveli enendoda eshadile